काठमाडौं । तीन जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था गम्भीर संटकग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडाले मुलुक इतिहासकै गम्भीर आर्थिक संकटमा पुगेको बताएका हुन् ।
एमालेको तर्फबाट वर्तमान अर्थतन्त्रबारे आफ्नो धारणा राख्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै यसलाई बचाउने जिम्मेवारी सबैको भएको बताए ।
कोभिड महामारीको सामना गर्दागर्दै पनि ओली नेतृतवको सरकारले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई बिग्रन नदिएर तुलनात्मक रूपमा सवल र सुदृढ अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सकेको उनको भनाइ छ ।
पौडेलले वर्तमान सरकारका कारण अर्थतन्त्र इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको बताए । ‘यो सरकारले सहि नीति लिएर प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न चाहेको भए यो अवस्थामा आउने थिएन । आर्थिक अवस्था यस्तो हुने थिएन । पुरै अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइसक्यो । मुलुकलाई श्रीलंका बनाउने अवस्थामा पुगिसक्यो,’ पौडेलले भने ।
अर्थमन्त्री शर्माले कानुनविपरीत काम गरिरहेको भन्दै यसले उनलाई नै समस्या पर्ने बताए । अर्थमन्त्रीले विदेशबाट आएको रकम खुलाउन राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई पत्र लेखेको भन्दै पाण्डेले उक्त काम गैर कानुनी भएको बताए ।
‘यदि एजेन्सी दह्रो हुने हो भने यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई हाल्नुपर्ने हो भित्र, किन लेख्यौं पत्र भनेर यसो गर्न मिल्छ ? हामीले बनाएको ऐनभन्दा बाहिर गएर कसैले चल्न मिल्छ र ?,’ उनले भने ।
त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले देशको अर्थतन्त्र गलत व्यक्तिको हातमा परेको बताए । अहिले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि धरासायी हुने चिन्ता भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘आठ महिनामा आठ खर्ब आयात भइसकेको छ । अब वर्षभरिमा २२ खर्बको आयात हुनेछ । दुई खर्ब निर्यात गर्दा पनि २० खर्ब व्यापार घाटा हुनेछ,’ खतिवडाले भने ।
एएफसी फुटसल एसियन कप : नेपाल उज्वेकिस्तानसँग ५–१ ले पराजित स्थानीय निर्वाचन : कुन दलको घोषणापत्र कहिले ?